Umndeni ucela usizo ngowathunjwa ngoKhisimusi - Ilanga News
Home Izindaba Umndeni ucela usizo ngowathunjwa ngoKhisimusi
Umndeni ucela usizo ngowathunjwa ngoKhisimusi
Kubikwa ukuthi indodakazi yakwaMathenjwa yathathwa ngabantu abangaziwa enxanxatheleni yezitolo.
AKUSEHLI ngisho ukudla kuyise kaNkz Zinhle Mathenjwa okuthiwa wathunjwa ngabesilisa abangaziwa ngoKhisimusi.
UNEXHALA umndeni wakwaMathenjwa eMakhonyeni, eJozini, emuva kokuthunjwa kwendodakazi yawo elitshitshi elihamba uMkhosi woMhlanga kade ihamba nabangani bayo abathathu enxanxatheleni yezitolo eJozini ngoKhisimusi. Kubikwa ukuthi uNkz Zinhle Mathenjwa (21) oyisitshudeni saseDurban University of Technology (DUT), wathathwa ngabantu ababehamba ngemoto engaziwa, eyayinezinombolo zaseNgwavuma. Silobe izolo ngeSonto engakatholakali.
Kuvela ukuthi abangani bakhe yibona abamlanda kubo, okwathi besezitolo, kwavela omunye wabantu ababesemotweni, wabiza isisulu sangena phakathi maqede yashaya yachitha. Abangani baphuthume bayobika kubo kwesisulu ukuthi uNkz Mathenjwa usethathwe yimoto okuze kube yimanje akaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo. Uyise wesisulu, uMnu Ayanda Mathenjwa, uthe ukhathazekile ngokunyamalala kwendodakazi yakhe futhi eyithemba lakhe njengoba sekuyisikhathi eside ewa evuka nayo ngenhloso yokuthi iphumelele empilweni.
“Ngikhuluma nje, ngiseNgwavuma, ngihamba ngiyabuza ukuthi ngabe akekho yini owazi le number plate yale moto. “Kangazi ukuthi ngizophuma ngiyephi uma ngifuna indodakazi yami ngoba akekho ngisho noyedwa othi uyayazi le number plate. Ngicela noma ngabe ngubani ongaba nosizo okanye ayifanise indodakazi yami ukuba awuhlabe awulawule ngoba sengibuya khona naseziteshini zamaphoyisa. “Ngibikile oBonjeni, eJozini nakhona lapha eNgwavuma ngibathintile naseNdumo. Akwehli ngisho nokudla ngicabanga indodakazi yami okuwukuphela kwayo,” kusho uMnu Mathenjwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uzanyiwe izikhashana kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela engatholakali ukuphawula ngalolu daba. www.ilanganews.co.za
Previous articleIChiefs ivuma ukushayeka ngabalandeli
Next articleSishe ubuhanguhangu isakhiwo sePhalamende